बागलुङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ को हुग्दीशिरमा कार्तिक २९ गते चुनाव प्रचार प्रसारको सिलसिलामा एमाओवादीका कार्यकर्ताहरूले ढुङ्गा, लाठी, खुकुरी सहित गरेको हिंसात्मक आक्रमणबाट राजमोका आधा दर्जन नेता र कार्यकर्ताहरू घाइते हुनु भएको छ । घाइतेमध्ये अखिल नेपाल महिला सङ्घकी अध्यक्ष, निवर्तमान सभासद र राजमोकी समानुपातिक उम्मेदवार का. मीना पुनको शिरमा चोट लागेको छ भने का. रेमबहादुर थापाको हात खुकुरीले काटिएको छ । मिनबहादुर पुनको हातमा पनि खुकुरीको चोट लागेको छ । उहाँहरूमध्ये का. मीना पुनको काठमाडौँ बासवारीको न्यूरो अस्पतालमा र अन्य दुई जनाको ललितपुरको बी.एण्ड.बी. अस्पतालमा उपचार भैरहेको छ ।
नेकपा (मसाल) ले एमाओवादीलाई आफ्नो मित्रशक्ति मान्दै आएको छ । तर त्यसको हामीप्रतिको व्यवहार लगातार शत्रुतापूर्ण रहँदै आएको छ । गत कालमा उनीहरूले हाम्रो पार्टीका कार्यकर्ता वा समर्थकहरूमाथि वारम्वार हिंसात्मक र शत्रुतापूर्ण आक्रमण गर्दै आएका छन् । हुग्दीशिरमा उनीहरूको कारवाही हाम्रा विरुद्ध शत्रुतापूर्ण आक्रमणको लामो शृङ्खलाको नविनतम रूप हो । हाम्रो पार्टीले उनीहरूको त्यस प्रकारको कारवाहीको तीव्र शब्दमा भत्र्सना गर्दछ र त्यस प्रकारको कारवाहीहरूको दृढतापूर्वक सामना गर्ने घोषणा गर्दछ । निर्वाचन आयोगको आचार संहिता अनुरूप भोलि मंसिर २ गतेदेखि ४ गतेसम्म कुनै सभा, प्रदर्शन गर्न नमिल्ने भएकाले तत्काल त्यस प्रकारका विरोधको कार्यक्रम राखिएको छैन । चुनावपछि आवश्यकता अनुरूप त्यस प्रकारको कार्यक्रम बनाइनेछ ।
हुग्दीशिरको कारवाही निश्चित रूपमा सामाजिक फासिवादी प्रकारको कारवाही हो र त्यसबाट अझै पनि उनीहरूमा सामाजिक फासिवादी प्रकारको प्रवृति कायम रहेको कुरामा कुनै शङ्का रहन्न । उनीहरूको त्यस प्रकारको सामाजिक फासिवादी प्रकारको प्रवृतिका कारणले आगामी संविधान सभाको चुनावमा उनीहरूलाई वहुमत वा दुई�तिहाई वहुमत प्राप्त भएमा देशमा अधिनायकवादी शासन कायम हुने हाम्रो आशङ्का पुनः प्रष्ट भएको छ । त्यसका साथै उनीहरूको जातिवादी र मधेशवादीहरूसितको गठबन्धनका कारणले उनीहरूलाई उनीहरूले दावी गरे झैँ वहुमत वा दुई�तिहाई वहुमत प्राप्त भएमा जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी प्रकारको संविधान बन्ने, जातीय र क्षेत्रीय विग्रह तथा राष्ट्रिय विखण्डनको स्थिति उत्पन्न हुने र त्यसरी देशको राष्ट्रियता, जातीय र क्षेत्रीय एकतामा समेत गम्भीर क्षति पुग्ने सम्भावना छ । ती कुराहरूमाथि विचार गर्दा एमाओवादीको जातिवादी र मधेशवादीसितको गठबन्धनलाई वहुमत वा दुई�तिहाई वहुमत आएमा त्यो देशका लागि अत्यन्त घातक हुनेछ । त्यो अवस्थामा लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा आघात पुग्ने, देश अधिनायकवादतिर जाने र राष्ट्रियतामा गम्भीर आँच पुग्ने सम्भावना रहनेछ । त्यो वस्तुस्थितिमाथि ध्यान दिएर नै आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्न हाम्रो पार्टीले सम्पूर्ण जनतासित अपिल गरेको छ र अहिले पनि पुनः त्यस प्रकारको आवश्यकतामा जोड दिन्छ ।
उक्त घाइतेहरूलाई प्रशासनद्वारा हुग्दीशिरबाट पोखरासम्म हेलिकोप्टरबाट ल्याउने व्यवस्था गरे पनि त्यहाँबाट काठमाडौँ ल्याउने व्यवस्था गरिएन । त्यसले गर्दा विरामीहरू आफै खर्च गरेर प्लेनद्वारा काठमाडौँ आउनु प�यो । उनीहरूको उपचारका लागि पनि सरकारले अहिलेसम्म कुनै व्यवस्था गरेको छैन । हुग्दीशिरको आक्रमण तथा कारवाहीका लागि संलग्न व्यक्तिहरूबारे छानबिन र कारवाहीका लागि पनि अहिलेसम्म कुनै कार्य गरिएको छैन । त्यसबाट विभिन्न स्तरमा सरकार र प्रशासनले एमाओवादीको नै पक्ष लिएको देखिन्छ । त्यो अवस्थामा हाम्रो पार्टीले एमाओवादीको उपरोक्त प्रकारका कारवाहीहरूको छानबिन गर्न र तिनीहरूका विरुद्ध आवश्यक कारवाही गर्न निर्वाचन आयोगसित माग गर्दै हुुग्दीशिर घटनाका घाइते सबैको सम्पूर्ण उपचारको व्यवस्था, उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति र दोषीहरूविरुद्ध कारवाहीका लागि प्रभावशाली कदम उठाउन सरकार र निर्वाचन आयोग समेतसित नेकपा (मसाल) ले जोडदार माग गर्दछ ।
अन्तमा, एमाओवादीका सबै सामाजिक फासिवादी प्रकारका कारवाहीहरूको दृढतापूर्वक सामना गर्न पार्टीका सबै समर्थक र न्यायप्रेमी जनतासित अपिल गर्दछ ।
मिति ः २०७० मंसिर ०१ गते